'Rock' Em, Sock 'Em Robots' Live-Action Firimu Mukushanda NaVin Diesel
musha Horror Varaidzo Nhau 'Rock' Em, Sock 'Em Robots' Live-Chiitiko Firimu Mukushanda NaVin Diesel
'Rock' Em, Sock 'Em Robots' Live-Chiitiko Firimu Mukushanda NaVin Diesel
yakanyorwa na Trey Hilburn III April 20, 2021
zvakanaka, Dombo 'Em, Sock' Em Robots yaive tafura yetafura ichikura. Waive mumwe weiyo mitambo, yakafanana neane Nzara, Mvuu Dzine Nzara kwaunopwanya gehena kunze kwepurasitiki yakachipa kuitira kuti neimwe nzira itonge shamwari. Zvino, Universal, Mattel uye Vin Diesel vari kuunza iyo yakakurisa tafura petafura kune inorarama yekuita firimu.
Kune avo vanga vachigara pasi pedombo, Dombo 'Em, Sock' Em Robots waive mutambo waisanganisira marobhoti ebhuruu uye matsvuku achipesana neumwe neumwe kudedera kwekudzora. Chinangwa chaive chekurova mumwe mutambi munzvimbo chaipo kuti agogodza block yake uye awane mapoinzi uye pakupedzisira akunde.
Vin Diesel achatamba nyeredzi uye zvakare agadzire nekambani yake One Race Films. noumharadzi uye Mufambi munyori, Ryan Engle akanyora screenplay iyo inoona baba nemwanakomana vachiita mabhii nemuchina wehondo, izvo zvandinofungidzira kuti tichaona kuenda kwetsiva mimwe michina yehondo.
Kana iwe uchirangarira makore mashoma kumashure Hugh Jackman aive nefirimu inonzi Steel Real zvinonzwika zvakafanana neiyi. Asi, zvichave zvakanaka kuona iyo nyowani kutora uye kufungidzira chii? Marobhoti achirova iyo shit kunze kwemarobhoti akanaka.
“Kutora zvekare Dombo 'Em Sock' Em Robots mutambo, naMattel semumwe wangu, uye kuubatanidza nerudzi rwekuvaka pasi rose, kuita bhindauko kubudirira kwatakaita neUniversal kunofadza zvechokwadi, ”akadaro Vin Diesel uyo achatambawo.
Imi varume munofungei nezve pfungwa ye Dombo 'Em, Sock' Em Robots kurarama-chiito firimu? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Ropa rakadzika iJaya rakashata rakabvaruka rinova mhedzisiro inofanirwa-kuona. Tarisa uone izvo apa.
Rarama-ChiitikoDombo 'EmSock 'Em MarobhotiVin Diesel
'Iyo Resort Resort' Inosvitsa Nyowani Chilling Rudzi rweMweya Nyaya
'Kuuraya Iyo Dhiragoni' Ngoro Inotipa Iyo Yakanaka, Fairy Tale-Yakazadza Kutyisa
'Muppets Haunted Mansion' Halloween Yakakosha Seti yeDisney +
'American Refugee' Kukanda Kwakaziviswa naBlumhouse uye Epix
'Hazvizivikanwe' Psychological Horror Anthology Series Inotungamirwa kuAmazon
Elijah Wood Anotamba mumiriri weFBI Akabvunzana ...
Bhurawuza Cateories Select Category Amazon (bhaisikopo) (7) Amazon (dzakateerana) (9) AppleTV + (1) Blu mahara (3) Comedy Horror (46) Comics (12) Facebook (akateedzana) (1) Ngano (31) Yakawanikwa Footage (26) Gore (23) HBO (mafirimu) (4) HBO (dzakateerana) (7) Horror Mabhuku (44) Horror Varaidzo Nhau (10,461) Anotyisa Mafirimu (175) Zvinotyisa Series (50) Zvinotyisa Subgenres (8) Hulu (akateedzana) (4) Bvunzurudzo (bhaisikopo) (32) Nhaurirano (dzakateerana) (2) LGBTQ Inotyisa (29) Lists (mafirimu) (37) Lists (akateedzana) (2) Pamusika (19) Monster Horror (9) Wongororo dzeMovie (41) Mafirimu (11) Mumhanzi (35) Netflix (bhaisikopo) (15) Netflix (akateedzana) (20) Kwete-Ngano (3) Zvakaenzana (75) Psychological Horror (zvinonakidza) (52) Series Ongororo (7) Kubvunda (bhaisikopo) (39) Kubvunda (dzakateerana) (15) Slasher (4) Shamisa uye Zvisingawanzo (35) Kutenderera Mafirimu (47) Kuratidzira Series (17) Zvidhori (2) Ngoro (firimu) (134) Ngoro (dzakateedzana) (31) Mhosva Yechokwadi (41) Vhidhiyo Mitambo (165) YouTube (bhaisikopo) (3) YouTube (akateedzana) (11)